Xaalada dalka suudaan iyo Wararkii ugu dambeeyay Wadahadalka ka furmaya | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Xaalada dalka suudaan iyo Wararkii ugu dambeeyay Wadahadalka ka furmaya
Jun 12, 2019 - Aragtiyood
Khartoum ( Kalshaale ) Ururada Rayidka ah ee wadanka Sudan ayaa shaaciyey inay joojiyeen ololihii shaqo joojinta ahayd ee soo socday sadexdii maalmood ee lasoo dhaafay kadib markii is-afgarad laga gaaray sharuudihii ay hordhigeen Golaha Militariga dalkaSudan.
Wakiilka Dowlada Itoobiya Ambassador Maxamuud Dirir oo dhex dhexaadinta hada garwadeen ka ah ayaa warkan ku shaaciyey shir jaraa’iid oo uu ku qabtay magaalada Khartuum.
Militariga ayaa la sheegay inay ogolaadeen inay siidaayaan qaar kamid ah hogaamiyayaasha Mucaaridka ah oo ay xir xireen, si dib loogu bilaabo wadahadalkii ay kula jireen ururada rayidka iyo dhismaha Maamul KMG ah.
Ururada Rayidka ah ayaa bilaabay olole shaqo joojin ah oo ka hirgalay guud ahaan wadanka Sudan Axadii lasoo dhaafay ayaa arrintan ku cadaadinayey militariga kadib hawlgalkii ay ciidamada ku dileen in ka badan 100 qof 3dii bishan June.
Labada dhinac ayaa illaa iyo hada ku heshiin waayey wadahadalkooda oo soo socday tan iyo 11kii April xiligii xukunka militariga ka tuuray Madaxweynihii hore Cumar Al Bashiir, qodobka caqabada ku noqday heshiis dhexmara militariga iyo shacabka ayaa ah cida hogaamin doonta Dowlada KMG ah.